अहिले सरकार छ जस्तो लाग्दैन र ? – ओली - Baikalpikkhabar
अहिले सरकार छ जस्तो लाग्दैन र ? – ओली
७० प्रतिशत बजेट के गर्ने ? ओढ्ने ओच्छयाउने हो र !
११ चैत, काठमाडौं / प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले स्थानीय तहलाई कुल बजेटको ७० प्रतिशत बजेट माग गर्नु उपयुक्त नहुने बताएका छन् ।
बुधबार नगरपालिका संघको कार्यक्रममा स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिहरुले मुलुकको कुल बजेटको ७० प्रतिशत बजेट स्थानीय तहमा पठाउनुपर्ने बताएका थिए । उनीहरुले बजेटजति केन्द्र सरकारले राखेको गुनासो पनि गरेका थिए ।
तर प्रधानमन्त्री ओलीले स्थानीय तहलाई ७० प्रतिशत बजेट दिएर के गर्ने भनी प्रश्न गरे । ‘७० प्रतिशत बजेट के गर्ने ? ओढ्ने ओच्छयाउने हो र ?’ उनले भने ‘त्यसो हो भने प्रदेशले के गर्ने, केन्द्र सरकारले के गर्ने ?’
‘अहिले सरकार छ जस्तो लाग्दैन र ?’
‘सडक बालबालिका खाते भनेर हिँडिरहेका थिए, नि अहिले देख्नुहुन्छ ?’ उनले प्रश्न गरे ‘मान्छेका बच्चा कुकुरसँग लडेर कुकुरसँग मिलेर सुत्थे, तपाईं हामीले सडकभरि देखेको होइन, अहिले कहाँ छन् ? किनभने ती बालबालिकालाई हेर्ने सरकार छ ।’
मेलम्चीको पानी चैत १५ देखि कामठाडौंमा वितरण सुरु हुने र २ वर्षभित्रै थानकोट नौबिसे सुरुङ निर्माण पूरा गर्ने पनि प्रधानमन्त्री ओलीले बताए ।
बुधबार, ११ चैत, २०७७, साँझको ०५:३३ बजे